Khabar Break - मकवानपुरे पत्रकारिताको ट्रेन्ड सुधार्न जरुरी छः शिवकुमार काशी
मकवानपुरको मनहरी गाविस वडा ३ मा बसोबास गर्दै आइरहनुभएका पत्रकार शिवकुमार काशी प्रेस चौतारी मकवानपुरमा दुई कार्यकाल अध्यक्ष र त्यसअघि दुई कार्यकाल सदस्यका रुपमा सक्रिय हुनुभयो । भदौ २५ गतेबाट अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट बाहिरिएका उनी नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरका निर्वाचित सदस्य हुन् । २०५८ सालबाट निरन्तर पत्रकारितामा सक्रिय उनी हेटौँडाबाट प्रकाशन भइरहेको थाहासन्देश दैनिकका सम्पादक तथा मनहरीबाट प्रकाशन हुने थाहादर्शन साप्ताहिकका सम्पादक-प्रकाशक छन् । अहिले प्रसारणको तयारीमा रहेको मनहरी एफएम १०४ दशमलब ३ मेगाहर्जका स्टेशन म्यानेजरको भूमिकामा पनि उनी छन् । उहाँलाई खबरब्रेकले पाँचवटा प्रश्न सोध्यो, जुन प्रश्नहरु नेपाल पत्रकार महासंघसँग सम्बन्धित थिए ।
१.नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरको अधिवेशन नजिकिदै गर्दा तपाइको संगठन को तयारी कस्तो छ ?
–अहिले म नेतृत्वदायी भूमिकामा मेरो संगठन अर्थात प्रेस चौतारी नेपालमा छैन । यसर्थ नेतृत्वमा रहनुहुने साथीहरुले पक्कै पनि तयारी गरिरहनुभएको छ । किनकी, यो बर्ष नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन बर्ष हो । अघिल्लो निर्वाचनमा महासंघमा २ मतको फरकले हामीले नेतृत्व गुमाएका थियौँ । त्यही गुम्दाको घाउ सेकताप गर्न पनि यसपटक निर्वाचनको तयारी राम्रै भइरहेको छ भन्ने अनुमान जोकोहीले गरेका छन् ।
२. नयाँ सदस्यता बितरण गर्दा नै आफ्नो अनुकुल नभएकोले धेरै पत्रकारलाई सदस्यता पाउनबाट रोक्नु भयो भन्ने आरोप तपाइको संगठनमाथि छ, सामाजिक संजालमा महासंघ मकवानपुरले गरेको सदस्यता वितरणबारेको टिप्पणीहरु धेरै आइरहेका छन् रु तपाइको धारणा के हो ?
–त्यो मिथ्या आरोप हो । नेपाल पत्रकार महासंघको १४ सदस्यीय कार्यसमितिमध्ये बरियताक्रममा म १३ नम्बरको सदस्य मात्र हुँ । अब भन्नुस् महासंघमा मेरो के चल्छ रु संगठनकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो प्यानलका हामी जम्मा ३ जना त छौँ । संगठनका तीनजना सदस्य मात्रै भएको कार्यसमितिमा हामीले रोक्ने, अबरोध गर्ने, असहयोग गर्ने भन्ने कुरा पूरै निराधार छ । र, अर्को चाहिँ के बुझ्नुप¥यो भने केन्द्रले शुद्धिकरण अभियान चलाएको छ । सो क्रममा शुद्धिकरण अभियानमा निर्मम ढंगले मकवानपुर शाखाले राख्यो । त्यसमा प्रेस चौतारीका पनि गुनासाहरु थिए । जुन ज्ञापनपत्रकै रुपमा महासंघमा बुझाइएको छ । शुद्धिकरणका क्रममा केही साथीहरु छुट्नुभएको छ । उहाँहरुप्रति म अत्यन्त चिन्तित छु । जसले मिडियाकर्ममा निरन्तर योगदान गर्नुभएको छ । अब यो बर्ष हुने चुनावपछि महासंघको नयाँ नेतृत्वले पहिला छुटेका ती साथीहरुप्रति न्याय गर्नुपर्छ । हाम्रो र मेरो तर्फबाट म यसबारे निरन्तर आवाज उठाउँछु । अन्याय भएपछि सामाजिक सञ्जालहरुमा आफ्ना आक्रोश पोख्ने कुराहरु त भइहाल्छ नै । ३.महासंघको आगामी चुनावमा अध्यक्ष पदमा उम्मेद्बारी दिदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ, तपाईंको उम्मेद्वारीको औचित्य पुष्टि कसरी गर्नुहुन्छ ?
–घोषणा भइसकेको छैन । तर, संगठनले अघि बढाएको खण्डमा म तयार नै छु । स्वतन्त्रपूर्वक एकल हिसावले उठ्न सक्ने अबस्था छैन । मैले अध्यक्षको रुपमा महासंघको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका पाएमा महासंघलाई संस्थागत परिपाटीबाट चलाउनेछु । विधि, विधान, पद्धति मिचिने छैन । हरेक कार्य समिति र पदाधिकारीहरुले बिजनेस जिम्मेवारी पाउनेछन् । जिम्मेवारी पाइएन भनेर हामीहरुले जस्तो नेतृत्वसँग कार्यकाल अबधिभर गुनासो गर्नुपर्ने छैन । महासंघको गरिमा बढाउनका लागि सरकारी, गैरसरकारी संस्थाहरुसँगको समन्वयलाई सुदृढ पारिनेछ भने पत्रकारहरु र मिडिया हाउसको समेत क्षमताबृद्धि कार्य व्यवहारिक रुपमै पहलकदमी लिइनेछ । मिडिया संञ्चालक र मिडियाकर्मीबीचको सौहाद्र्धता मालिक–कामदारको रुपमा होइन कि एकै सिक्काका दुई पाटाको रुपमा विकास गर्न प्रयत्नरत रहनेछु । त्यसका अलावा श्रमजीवि पत्रकारको अधिकारका कुरालाई दबाबमुलक हिसावले होइन आपसी समझदारी र सहजीकरणका माध्यमले मिडिया सञ्चालक र पत्रकारबीच उठान गरी व्यवस्थित गरिनेछ । महासंघ आबद्ध पत्रकारहरुबीचको एकताको भावनाको विकास गर्दै सल्लाहकार र पार्षदहरुसँगको मासिक÷त्रैमासिक समिक्षा र सल्लाहको माध्यमबाट निरन्तर सक्रियता जनाइनेछ भने जिल्लास्थित मिडिया हाउसहरुको श्रीबृद्धिका लागि स्थानीय उत्पादनहरुको बिज्ञापन प्रवद्र्धनमा पहिलो हक जिल्लाकै हुनुपर्छ भनेर उद्योगीहरुसँग परिणामुखी लबिङ गरिनेछ ।
४. मकवानपुरको पत्रकारिताका बारेमा तपाईको बुझाइ के हो रु यसलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ ?
–मकवानपुरको पत्रकारिता खासमा अहिले पत्रकारिता छैन । आवाजबिहिनहरुका आवाज भनेर मिडियाले जुन उपमा पाएका थिए, लाग्छ अब त्यसो भन्नु ब्यर्थ छ । किनकी हामीहरु आवाजबिहीनहरुका पक्षमा व्यवहारतः देखिएका छैनौ । आवाजबिहिनहरुको आँगनमा पुगेर उनीहरुका दृष्य, आवाज, भावना, बिचार कैद गर्नुभन्दा पनि ठूला आवाज भइसकेकाहरुले महँगा रेस्टुरेन्टहरुमा आयोजना गर्ने औपचारिक र प्रायोजित सूचनाहरुमा हामी रमाउन थालेका छौँ । यसर्थ यो ट्रेन्डलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनु जरुरी छ । हामीहरुका कलम, क्यामेरा र रेकर्डरहरु दुर्गमका गाउँहरुमा, दलित, जनजाति, पिछडिएका सम्प्रदायतिर तेर्सिनु जरुरी छ । यदि त्यसो नहुने हो भने अनलाइन र रेडियोहरुमा दुईलाइने समाचार लेख्ने र पत्रिकाहरुमा फोटो ठूलो बनाएर भर्नेबाहेक अरु हुन नसक्ने भए । यसर्थ पत्रकारिताको ट्रेन्ड सुधार आबश्यक छ । सारमा भन्न खोजिएको चाहिँ औपचारिकता भन्दा पनि अनौपचारिकतातिर गएर खोजी समाचारमा पत्रकारको आँखा पुग्नुपर्ने देख्छु । मोफसलमा पनि पत्रकारितामा अबसर छन् । यहीँ राम्रो काम गर्ने पत्रकारहरु एकदशकदेखि पत्रकारिता कर्मबाटै बाँचिरहेकै छन् ।
५. पत्रकार महासंघको कार्यसमितिमा तपाई पनि हुनुहुन्छ, यो तीन बर्षको अवधिमा पत्रकार र संचारमाध्यमको हितमा के के गर्नुभयो ?
–कामहरु हुँदै नभएको होइन । हामीले भौतिक संरचनालाई बेसी प्राथमिकता दियौँ । अहिले दुईतले शानदार कार्यालय छ । सूचना केन्द्र स्थापना गरेर पत्रकारलाई सुविधा दिनेगरी इन्टरनेट, कम्प्युटरको व्यवस्थापन गर्दैछौँ । विभिन्न गैससहरुसँगको समन्वयमा भौतिक बस्तुहरु, फर्निचरहरु जोडेका छौँ । त्यसका अलावा हामीले क्षमता अभिबृद्धिका लागि खोज पत्रकारिता तालिम, रेडियो पत्रकारका लागि प्राविधि तालिमहरु चलायौँ । सरकारी र गैरसरकारी निकायहरुसँग समन्वय गरी बिज्ञापन बितरणमा सहजीकरण गरेका छौँ । यी राम्रा कामहरुको तारिफ गर्नुपर्छ । यो बीचमा म र हामी अर्थात चौतारीका तीनजना साथीहरु खासगरी संस्थागत परिपाटीको विकासका लागि बढी उद्वेलित भयौँ । नेतृत्व तहका व्यक्तिहरु एकल ढंगले चल्न खोज्दा कतिपय अबस्थामा महासंघको गरिमा घट्ने भएकाले त्यसतर्फ बढी सचेत गराउनुप¥यो । त्यसको असर अहिले पनि कहीँकतै देखिन्छ । ती असरहरुलाई कोट्याएर हिँड्ने होइन, अब ती असरबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।